International Archives - Gloria News Journal
အင်တာဗျူး
ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေးကို ခွဲခြားသူသည် နိုင်ငံ့ရန်သူ ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘို မိန့်ကြား
ကလေးဆရာတော်ကြီး ဖေးလစ်လျန်ခန်းထန်မှ “ဗာတီကန်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအကြောင်း” ဂလိုရီးယားသို့ မိန့်ကြားတော်မူခြင်း
Cardinal Charles Bo complains of ‘criminal silence’ of Myanmar’s religious leaders
Yangon, Myanmar, posed by Nirmala Carvalho and Joseph Kung Za Hmung
Myanmar’s cardinal Charles Bo called out the country’s religious leaders for their “criminal” silence about the violence in the country. Cardinal Charles Maung Bo of Yangon also has called on the military and militias to show “mercy” on the poverty-stricken populations caught in the crossfire of the country’s ongoing ethnic conflicts.
“Notasingle day passes without the heart wrenching news of innocent civilians being displaced or killed or maimed by the ongoing conflict in Lashio, other Northern regions and Rakhine State,” the cardinal said in an Oct. 1 statement.
“I had served as the priest and bishop in this area for almost 20 years. Most of these people are ex..
ရဟန်းမင်းအမတ်ချားလ်စ်ဘိုက ဘုန်းတော်ကြီးနေရီအူးစ်မောင်မောင်အား ရဟန်းမင်းကြီး၏တရားဟောအမှုတော်ဆောင် မွန်ဆီညော်ဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ပေးအပ်တော်မူ
ရန်ကုန်၊ မတ်လ ၄၊ ၂၀၁၈
ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်ကြီး၊ ရဟန်းမင်းအမတ် ချားလ်စ် ဘိုက ဘုန်းတော်ကြီး နေရီအူးစ် မောင် မောင် (လက်ရှိရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ၊ စိန်ဂျုဒ် ကက်သလစ်သာသနာ၏ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး) အား ရဟန်းမင်းကြီး၏ တရားဟောအမှုတော်ဆောင်မွန်ဆီညော်ဘွဲ့ကို မတ်လ (၄) ရက်နေ့က ချီြး�..
မက်္ကဆီကိုနိုင်ငံရှိ ကြေးဖြင့် ထုလုပ်ထားသောခရစ်တော်၏မိခင်မေရီ ဆင်းတုမှ သံလွင်ဆီမျက်ရည်စီးကျမှုဖြစ်ပေါ်
မက်္ကဆီကို၊ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၈
မက်္ကဆီကိုနိုင်ငံရှိ လာခရုစေးကက်သလစ်သာသနာနယ်ရှိ ဟော့မြို့က ဂွါဒါလုပေမယ်တော်ဘုရားကျောင်း ၀င်းရှိ မေရီ (မယ်တော်) ဂူတွင် တည်ထားသော (ကြေးဖြင့်ထုလုပ်ထားသော) မေရီဆင်းတု၏မျက်စိထဲမှ သံလွင်ရည် သည် မေလစတင်ပြီး စီးကျမှု ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
လုဒ်မြို့တွင် ထင်ရှားပြတော်မူခဲ့သော မယ်တော် သခင်မ (မေရီ) က မသန်စွမ်းသော သီလရှင် ဘဲနဒေးတေ မိုရီအိုဟာ၏ရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေ
ပြင်သစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂၊ ၂၀၁၈ CNA
မယ်တော်သခင်မ (မေရီ) က မသန်စွမ်းသော ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် သီလရှင်ဘဲနဒေးတေမိုရီအိုဟာ သက်တော် (၇၉) နှစ်၏ရောဂါကိုပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ လုဒ် မြို့တွင်ထင်ရှားပြတော်မူခဲ့သော မယ် တာ် ဂူ၌ ပျောက်ကင်းစေတော်မူခဲ့သည်။ သီလ ရှင်ဘဲနဒေးတေ မိုရီအိုဟာသည် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး မသန်�..
ကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ဆိုင်သော အသက်ကန့်သတ်ချက်ဥပဒေကို ရဟန်းမင်းကြီးက ပြင်ဆင်လိုက်ပြီ
ဗာတီကန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅၊ CNA
ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ် အရှင်သူ မြတ်သည် ကက်သလစ် ဆရာတော်ကြီးများ နှင့်ဗာတီကန်နန်းတော်ရှိ အရာရှိဝန် ထမ်းများ၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သော အသက် ကန့်သတ်ချက် ကာနွန်ဥပဒေကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့က ပြင်ဆင်တော်မူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ပါလက်စတိုင်းအစိုးရက ဂျေရုစလင်မြို့အား ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေထဲတွင် ထည့်နိုင်ရေး ဗာတီကန်အစိုးရအား အကူအညီတောင်းခံ
ဗာတီကန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈ CNA
ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရာယအာမာလာကီက ဗာတီကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဒီနယ်ပါရိုလင်းအား ဗာတီကန်နန်းတော်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၆) ရက်ကတွေ့ဆုံပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံက သိမ်းပိုက်ထားသော ဂျေရုစလင်မြို့အား ပါလက်စတိုင်း ပိုင်နက်ထဲတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရေး ကူ�..
Copyright © 2014 Gloria News- Terms & Privacy. Developed by Ideal Technology.